RAHARAHA OTIV BOENY : Tsy mbola misy vahaolana ny fanonerana ny volan’ireo mpikambana
Tsy raikitra ny fivoriambe izay saika natao tao amin’ny La voirie Analakely ny sabotsy 15 aprily teo. 21 avril 2017
Mikasika ny olana misy ao amin’ny OTIV Boeny noho ny antony tsy nahazoana fanomezan-dalana hamory vahoaka. Voatery nahemotra amin’ny fotoana manaraka mbola tsy fantatra mandra-pilamin’ny toe-draharaha misyeto amin’ny Firenena.
Ho tapitra amin’ity faran’ny volana avrily ity ny enim-bolana faharoa, izay hikarohana hevitra hanonerana ireo volan’ny mpikambana nanjavona tao amin’ity fampindramam-bola madinika ity, dia ny fahefana nomena ireo mpitantana vonjimaika io orinasa io izany.
Tsy hita izay marina hatramin’izao, efa tapitra mahafantatra ny io olana io avokoa ny rehetra eto amin’ny Firenena hatramin’ny Filoham-pirenena. Efa nisy ny fifampiresahana tamin’ny minisitra tompon’andraikitra fa dia tsy nisy vahalaona hatramin’izao. Voalaza ihany koa fa nisy orinasa roa vonona hamaha io olana io, saingy tsy nahazo fankatoavana hatramin’izao. Mhenahena eo io raharaha io hatramin’izao. Raha ny resaka mandeha anefa dia tsy hangina fotsiny amin’izao ireo niharan’ny fanjavonan’ny vola fa hanao izay hevitra rehetra azo atao mba hanehoana ny alahelon’izy ireo, na ho inona akony na ho inona.
Notsindromin’ilay tovolahy antsy ny sipany HASAROTAM-PIARO TAFAHOATRA (474) 19 avril 2018 Maty tanteraka ny demokrasia, manjaka ny ramatahora FANDAVANA NY HETSIK’IREO SOLOMBAVAMBAHOAKA (349) 19 avril 2018 Tsy hihemotra ireo depiote, andrasana izay hiseho NA MISY AZA NY RAMATAHORA… (326) 21 avril 2018 Hanakarama « be sandry » hisakana ny hetsika ny Hvm TATITRA MOMBAN’NY LALAM-PIFIDIANANA ETO ANTANANARIVO (308) 17 avril 2018 Manaraka fitsaboana eto an-drenivohitra FITIFIRANA NY FILOHA LEFITRY NY FITSARANA AO FIANARANTSOA (264) 17 avril 2018 Mikoropaka, miantso fifanatonana PRAIMINISITRA MAHAFALY SOLONANDRASANA (260) 23 avril 2018